Sic Bo - Ciyaartaan bilaash ama lacag dhab ah - CasinoAdvisor.eu
Laga yaabee in badankood aan la aqoon, laakiin sic bo waxaa sidoo kale loo yaqaan dai siu ama tai sai, tarjumaadda dhabta ah ee loo maleynayo dhagaxaanta. Sic Bo wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Koonfur Bari Aasiya waxaana maalmahan sidoo kale si ballaaran loogu bixiyaa casinos online. Asal ahaan, sic bo waxaa keenay muhaajiriinta Mareykanka horaantii qarnigii 20aad, halkaasoo ciyaarta markii dambe ka timid Yurub. Iyada oo ciyaarta casino sic bo waxaad saadaalinaysaa isku dhafka lagu duubi doono wadar ahaan 3 laadhuu. Sic Bo ma aha ciyaar khamaaris adag oo lagu barto, laakiin miiska ciyaarta wuxuu umuuqdaa mid cabsi galin kara marka ay timaado xulashooyinka badan ee ciyaarta. Maqaalkan waxaan si qoto dheer ugu galaynaa xeerarka ciyaarta si aad khamaar ugu qaadatid waqti aan badnayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaad isku dayi kartaa sic bo bilaash, sidaa darteed dhammaantood waxay noqonayaan waxoogaa cad haddii aad iskudaygi karto naftaada. Ciyaartan waxaa sidoo kale lagu bixiyaa casinos ku saleysan dhulka oo leh miisas ciyaaro kala duwan. Waxa kale oo aad wali ka heli kartaa ciyaaro badan oo Sic Bo ah khadka tooska ah ee casinos kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira xitaa suurtagal in lagu ciyaaro tan dhabta ah iibiyaha a casino toos ah.
Xeerarka Ciyaaraha ee Sic Bo
Sida ciyaar kasta oo casino ah, oo leh sic bo waxaad marka hore ku bilaabeysaa go'aaminta sharadkaaga. Waxa aad si sax ah u sharad kartaa way ka duwan tahay casinos-yada kala duwan ee internetka iyo noocyada kulankaan. Sic bo sidoo kale waxay u egtahay Maraykanka craps, laakiin isku mid maahan. Waxaa jira 3 laadhuu kulankaan casino, shaqadaadu waa inaad isku daydo inaad saadaaliso natiijada 3 laadhuu sida ugu fiican ee aad awoodid. Markaa waxaad samaynaysaa xulasho aad ku sharraxayso, si kale haddii loo dhigo ma si sax ah ayaad u saadaalin kartaa mid ka mid ah laadhuuhaan? Mase qiyaasi kartaa 2 ka mid ah laadhuugaas? Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ikhtiyaarro badan oo badan oo aad ku sharxi karto. Tusaale ahaan, wadarta guud ee indhaha laadhuu wada. Ama waxaa laga yaabaa inaad nasiib u leedahay inaad qiyaasto dhammaan 3? Dabcan waxay sameynaysaa kala duwanaansho xagga bixinta ha ahaato mid maleeya hal ama 3 laadhuu.
Miiska ciyaarta wuxuu umuuqdaa wax sidan ah:
Hoos waxaad ku aragtaa jadwal leh iskudhafyo kala duwan oo aad ku khamaari karto lacagta u dhiganta.
Bixinta saadaasha saxda ah
Weyn / Yar: 11 ilaa 17 (Weyn) ama 4 ilaa 10 (Yaryar). 1: 1
Mid baa dhinta: 1: 1
Laba laadhuu: 2: 1
Saddex laadhuu: 3: 1
Laba ayaa dhinta: iskudarka laba laadhuu. 6: 1
Wadarta wadarta: Wadarta tirada saddexda laadhuu.
9, 10, 11 ama 12: 6: 1
8 ama 13: 8: 1
7 ama 14: 12: 1
6 ama 15: 18: 1
5 ama 16: 30: 1
4 ama 17: 60: 1
Labo jeer: Laba laadhuu oo isla lambar ah. 11: 1
Seddexleey kasta: seddex jeer dhimashadu waa tiro isku mid ah. 30: 1
Saddex qaas ah: Saddex jeer 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. 180: 1
Ciyaar toos ah Sic Bo
Sic Bo wuxuu si gaar ah caan ugu yahay ciyaartoyda Aasiya. Had iyo jeer waxaa sidoo kale laga arki karaa jawiga ciyaarta iyo walxaha garaafka ah ee casinoani ka soo jeedo Koonfurta Bariga Aasiya Europe dhexdeeda, waxaad sidoo kale kaheli kartaa miisaska sic bo casinos-ka jirka leh oo leh croupier dhab ah. Si kastaba ha noqotee, miyaad raadineysaa khibrad casri ah oo toos ah sida Macau halkaasoo cayaartan wali si ballaaran loo ciyaaro? Ha walwelin, sidoo kale waa suurtogal in lagu ciyaaro sic bo casino toos ah.
Waad ka ciyaari kartaa qolkaaga fadhiga waxaadna toos ula xiriiri kartaa croupier-ka. Xulashada aad ka sameyso biraawsarka webka, sida sharadka iyo laadhkyada aad sharad ku dhigto, ayaa isla markiiba laga arki karaa shaashadda kumbuyuutarka ganacsadaha. Kadib qubbad muraayad ah ayaa ka dul martay lafaha. Caadi ahaan laadhuuga hoostiisa qotomiyadan si otomaatig ah ayaa loogu qasaa si ciyaarta loogu ilaaliyo sida ugu macquulsan. Markaad ku ciyaareyso kulankaan qamaarka tooska ah waxaad runtii la kulmeysaa jawiga casino dhab ah, laakiin waxaad kaheleysa raaxada qolkaaga fadhiga.
Sida aad u badan tahay inaad horeyba ugu aragtay jadwalka boqolleyda lacag bixinta ee kala duwan, waxaa jira farqi aad u badan! Dabcan, waxaas oo dhami waa inay ku xirnaadaan fursadaha guusha. Fursada yar ee guuleysiga, wey sii weynaan doontaa bixinta iyo tan kale. Markaa caqliyan caqli gal maaha inaad sharad ku gasho Triple Specific, maxaa yeelay fursada way yartahay oo waxaad u badan tahay inaad mashquul ku noqon doonto xoogaa kahor intaadan si sax ah u saadaalin 3 isku laad ah. Way ka caqli badan tahay inaad faafiso fursadahaaga inaad waxbadan ku guuleysato, tusaale ahaan inaad ku sharraxdo Big / Small ama isku day inaad saadaaliso labada laad. Ma lahaan kartid lacag bixin intaas le'eg, laakiin waxaad fursad weyn u leedahay inaad guuleysato! Wax badan ka baro xeeladaha sic bo.
Bogga ugu weyn » SIC Bo